Mogadishu Journal » Dowladda Iiraan oo 20 ruux xukun dil ah ku fulisay
Dowladda Iiraan oo 20 ruux xukun dil ah ku fulisay
Mjournal :–Iran waxay xukun dil ah ku fulisay dad badan oo 20 qof dhan oo ay sheegtay inay ka tirsanaayeen koox argagixiso oo Sunni ah. Xeer ilaaliyaha guud waxaa uu sheegay in raggaasi lagu helay inay geysteen qaraxyo xiriir ahaa iyo weerarro lagu qaaday deegaanno dadka Kurdiyiinta ee galbeedka dalka Iran, kuwaas oo lagu dilay hoggaamiyeyaal Sunniyiin ah iyo sidoo kale dumar iyo carruur.
Ugu danbeyntii, Kooxda reer Iran ah oo xuquuqda aadanaha u doodda waxay sheegtay in habka sharciga ee raggaas la marsiiyay uu aad u khaldanaa. Iran waxay xukun dil ah ku fulisay 250 qof ilaa iyo hadda sanadkan. Sanadkii hore tirada dadka xukunka dilka ah lagu fuliyay dalkaas waxaa lagu qiyaasay kun qof.